Toerana efatra momba an'Andriamanitra - Fiangonan'Andriamanitra Soisa manerantany
haino aman-jery > Journal succession > Journal succession 2019-01 > Fanorenana efatra momba an'Andriamanitra
I Eira vadiko dia miteny amiko fa mora ny maneho ny tenanao amin'ny matihanina sy sarotra rehefa miresaka momba an'Andriamanitra. Nandritra ny fotoam-pivavahako teo aloha, rehefa feno ny lahateny ara-teôlôjia izay tsy maintsy ianarako mandritra ny efa-taona tao Oxford sy roa taona tany Cambridge, i Eira dia nilaza fa indraindray dia gaga be aho indraindray rehefa miresaka momba ny polipitra. nitory.
Nanao ny asany izy mba hanamboarana ny fomba hitoriako ny fanorenan'ny finoana Kristiana mora kokoa, ary mbola manao izany izy.
Mazava ho azy fa marina izy. Nanao raharaham-barotra i Jesosy mba hiteny amin'ny teny tsotra indrindra fony izy nampianatra momba ny finoana sy ny fiainana. Fantany fa raha tsy misy mahazo ny zavatra lazainy, dia tsy misy dikany izany raha tsy milaza na inona na inona. Raha manazava zavatra azonao mazava tsara dia tsy midika hoe mafana fo izany. Andeha hiresaka momba ny hevi-dehibe vitsivitsy tokony ho fantatsika momba an'Andriamanitra isika.
Raha toa ka mankaleo antsika ny toriteny momba an'Andriamanitra, dia noho ny mpitory izany satria tsy nanaraka ny fitsipiky ny fifandraisana izy. Angamba tompon'andraikitra amin'izany isika satria tsy nitandrina tsara. Afaka mahazo antoka isika fa tsy meloka amin'Andriamanitra mihitsy ilay meloka. Ny zavatra mahaliana rehetra eto an-tany dia tsy mihoatra ny taratry ny saina izay nahary azy ireo. Tsy misy fandinihana manaitra kokoa an'izao tontolo izao afa-tsy ny fianaran'Andriamanitra. Ny Baiboly dia miantso antsika hianatra rehefa mangataka antsika ho tia an'Andriamanitra amin'ny saintsika rehetra.
Mazava ho azy fa matetika dia mora indrindra ny mianatra an'Andriamanitra amin'ny fijerena ny fomba famoronana ny fahitana ny zavaboary. Io no fomba mora ahitantsika kokoa ny fisaintsainan'ny masoandro amin'ny famoronana toy ny mijery mivantana ny tara-pahazavana amin'ny masoandro.
Raha mijery avana kely isika, dia mahafinaritra ny lokony isan-karazany, nefa tsy misy amintsika ireo loko ireo raha tsy taratry ny tara-pahazavana ireo. Ka tsy hahaliana ny izao tontolo izao raha tsy taratry ny toetran'Andriamanitra.
Mandritra izany Andriamanitra
Rehefa miresaka momba ny Mpamorona isika, dia tsy midika akory izany fa Andriamanitra dia nanisy bokotra iray taloha tamin'ny lasa ary efa nisy ny zava-drehetra. Mino koa isika fa ny zava-misy eto amintsika dia miankina amin'ny asa famoronan'Andriamanitra mitohy.
Tamin'ny herinandro lasa dia nanandrana aho ny hahafantatra hoe maninona ny olona sasany no mahatsapa fa mandà ny fivavahana ny siansa. Tsy marina izany. Ny siansa sy ny fivavahana dia mametraka fanontaniana samy hafa. Nanontany ny siansa: "Ahoana no fomba fiasa eto amin'ity tontolo ity?" Ho valin'izay, ny teolojia dia manontany hoe: "Inona ny fiainana ary inona ny dikan'ny zava-drehetra?" Afaka milamin-tsaina tsara tokoa isika raha tsy mahazo ny fanontana kely ny lalàn'ny siansa, fa raha tsy manontany momba ny dikany sy ny tanjon'ny fiainantsika eto an-tany isika, ahoana no fomba hahavita ny fiainana tsara indrindra sy hampiasana ny tsara indrindra amin'izany? isika sy izao tontolo izao dia mahantra indrindra.
Ny sasany dia mety hihevitra fa tsy lany andro Andriamanitra, satria tsy misy afa-tsy Andriamanitra irery no hivavaka amin'ny fitenin'ny boky taloha. Azo inoana fa raha manao fikarohana lalina ianao dia hahita serivisy am-bavaka ao amin'ny fiangonana izay tsy lavitra ny tranonao. Misaotra an'Andriamanitra manokana aho noho izany. Na izany aza, ny ankamaroan'ny serivisy ankehitriny dia mampiasa fiteny hafa be. Ny fanompoana momba ny fianakaviana miaraka amin'ny hiram-paneno maoderina, ataon'ireo vondrona gitara ary tohanan'ny projet LCD dia mihamalaza izany.
Ny sasany dia mety hieritreritra fa tsy lany andro ny kristianisma satria nifanena tamin'ny kristiana izay tsy mifanaraka amin'ny azy ny fiheverany ny fiainana. Hentitra izany! Hafiriana no nilaina izany na mahasalama ho antsika rehetra mba hanana fiarahana mifandimby?
Andriamanitra dia tafiditra ary tafiditra amin'ny zavatra rehetra
Matetika izy io no nizara roa. Niavaka ny "masina" sy ny "secular" isika. Fisarahana ratsy izany. Naneho izany fa ny ampahany amin'ny fiainana dia zava-dehibe amin'Andriamanitra, ny zavatra toy ny mandeha any am-piangonana, ny vavaka sy ny famakiana ny Baiboly, fa ny zavatra hafa dia tsy asan'Andriamanitra, toy ny mandeha, ny manipy daroka, na fandehanana fotsiny.
Na dia manantitrantitra ny fizarazarana aza isika, dia tia maneran-tany ary liana tanteraka amin'ny zava-drehetra Andriamanitra, fa tsy manilika ireo antokom-pivavahana fa anisany ny zavatra rehetra. Izany dia satria izaho sy ianao, ny zavatra rehetra ataontsika, ny zavatra rehetra iainantsika, dia zava-dehibe amin'ny 'Andriamanitra voakasik'izany'.
Noforonin'Andriamanitra ny zava-drehetra ary zava-dehibe aminy ny fiainana rehetra. Hoy i Jesosy: Indro, mitsangana eo am-baravarana aho ary mandondona. Na iza na iza mandre ny feoko ary manokatra izany amiko, dia hiditra aho. Mazava ho azy fa eo am-baravaran'ny fiangonana izy, fa eo am-baravaran'ny pub, ary ny orinasa, ny fivarotana ary ilay trano. Rehefa mamaky ity soratra ity ianao dia mandondona eo am-baravarana izay misy anao Andriamanitra.
Tsy manam-petra Andriamanitra
Taona maro lasa izay dia nihaona tamina lehilahy iray aho nilaza fa manana ny fampianarana ny Trinite Masina mampianatra tsara ao an-dohany. Fotoana kely taty aoriana dia tsy nahomby izy tao amin'ny oniversite ary tsy maintsy namita ny fianarany tsy nisy fepetra. Amin'ny fomba iray dia mendrika izany izy. Toa tena nieritreritra izy fa ny fahaizany ara-tsaina dia ho ampy hahafantarana ireo tsiambaratelon'Andriamanitra, saingy mazava ho azy lehibe loatra Andriamanitra.
Angamba isika rehetra afaka mahalala izany. Tiantsika ny mampihena an'Andriamanitra amin'ny habeny izay azontsika. Ny fakam-panahy ho an'ny teolojiana dia ny maniry ny hampihena an'Andriamanitra ny haben'ny finoana iray vita. Ny mpitondra fivavahana dia alaim-panahy hampihena an'Andriamanitra amin'ny haben'ny andrimpanjakana iray. Ny Kristiana sasany dia alaim-panahy hampihena an’Andriamanitra ny habe azo avy amin’io na izay zavatra iainana ara-pivavahana. Nefa tsy misy an'izany rehetra izany. Andriamanitra lehibe, lehibe loatra, tsy misy fetra ary hofoanany ny fatorana isaky ny formula, ny andrimpanjakana rehetra, ny traikefa rehetra azontsika ieritreretana.
Izany rehetra izany dia ampahany amin'ny fiainana kristiana sy ny tsy fahatakarana tanteraka an'Andriamanitra. Na manao ahoana na manao ahoana zavatra ianarantsika avy amin'Andriamanitra, ny fahalalantsika azy sy ny fitiavantsika sy ny fiankohofana Aminy, dia hisy fahalalana bebe kokoa, ny fitiavana, ary ny hivavaka. Tokony hankalaza sy hankafy izany tsy tapaka isika; ary ny tena hitako fa mahavariana dia ity Andriamanitra Mahery sy Voninahitra tsy manam-petra ity, toetra izay tsy ho takatsika tanteraka mihitsy, na dia kely fotsiny aza, efa miandry anao sy hianarako ny hahita karazan-javatra maro isan-karazany eo amin'ny fiainana ankehitriny.
Mahaliana Andriamanitra ary mahita antsika koa mahaliana. Andriamanitra dia eo amin'ny daty ary izy dia miahy ny anio sy ny ampitso - ao anatin'izany koa aho. Andriamanitra dia mirotsaka ary te ho ekena ao amintsika sy ho antsika handray anjara. Tsy takatry ny saina Andriamanitra ary ho eo anilantsika mandrakariva ho sakaizantsika manokana. Mitahy anao hatrany Andriamanitra rehefa miaina sy mivoatra ary mankafy izay rehetra mety ho dikany amintsika isan'andro.